The Oppo Reno 5G bụ nke mbụ 5G smartphone dị na Europe Gam akporosis
Taa, Oppo Vice President Shen Yiren kwupụtara na Weibo na nke a malitere n'oge na-adịbeghị anya Oppo Reno 5G mbipụta ọ ghọwo nke mbụ 5G ama ama dakọtara na Europe.
Oppo, nke bụ otu n’ime ndị azụmahịa azụmaahịa mbụ 5com nke Switzerlandcom, butere ụzọ na Mepụta Oppo Reno 5G ama ama na Zurich, Switzerland. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ China jisiri ike bụrụ onye izizi wepụtara 5G ama azụmaahịa na ahịa Europe.
Maka ahịa ndị China, onye nrụpụta kwupụtakwala na e guzobere "Experilọ Ọrụ Ahụmịhe 5G" na China Unicom. Na nyocha nke ọsọ ọsọ 5G, arụmọrụ smartphone dị ike, na-enweta ọsọ ọsọ kachasị karịa 1.5GB / s ma kwụsie ike na ọsọ ọsọ nke ihe dịka 1.4GB / s.
Reno 5G dabere na ụdị ọkọlọtọ Oppo Reno 10X bia Edition. Maka ọnụahịa ahụ, ọnụahịa Oppo Reno 5G dị ntakịrị elu karịa ụdị ndị ọzọ na usoro Reno, na-akwụ ụgwọ euro 900. Ọ ga-adị maka ịzụta site na ọnwa a.
Ama ama nwere 6.6-inch notch-obere AMOLED ngosi, nke na-emepụta mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na akụkụ 19.5: 9. Ọ na - enye nhichapụ ihuenyo ruru 93.1% ma chekwaa ihuenyo Corning Gorilla Glass 6.
Ngwongwo azu shark gunyere igwefoto selfie 16 na ihe omuma LED. Ekwentị na-abịa onwem na a atọ igwefoto ntọlite, nke gunyere OIS nwere ike 586-megapixel Sony IMX48 sensor nwere oghere f / 1.7, oghere megapikselụ 13-megapixel telephoto lens nwere ihe ngosi anya 5x, yana oghere nwere nnukwu megapixel 8, nke OIS na-enye aka ma nwee oghere oghere. nke f / 2.2.
N'ikpeazụ, usoro ikpo okwu Qualcomm Snapdragon 855 Na-akwado smartphone, ngwaọrụ ahụ nwere batrị 4,065 mAh nke na-akwado ọkụ ọkụ ọkụ VOOC 3.0 ma bịa na teknụzụ PC mmiri mmiri dị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo Reno 5G bu ama mbu Europe nke 5G di
Mmelite izizi nke Realme 3 Pro na-eweta nkwado maka obere vidiyo vidiyo na-adịghị nwayọ na 960 fps
Icheta gam akporo: you na-echeta oge ochie gam akporo foto osisi?